ဆေးရွက်ကြီး၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆေးရွက်ကြီး၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ များစွာသော အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးနိုင်သည်။
ဆေးရွက်ကြီးမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးလိပ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားများအပေါ် မကောင်းသည့် ကျန်းမာရေး သက်ရောက်မှုများဖြင့် ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးလျက် ရှိသည်။ ဆေးရွက်ကြီး၏ လူသားတို့အပေါ်သက်ရောက်ခဲ့သည့် ကာလမှာ မနေ့တနေ့ကမဟုတ်ဘဲ အချိန်အတော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူသားတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို သိရှိနိုင်ရန် သုတေသနလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆေးရွက်ကြီးပါသည့် စီးကရက်သောက်ခြင်းကို မူလပထမ အနေဖြင့် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ တွင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံ၏ ဆေးပညာဂျာနယ် (British Medical Journal) က Richard Dollpublished research ဟုအမည်ပေးထားသည့် လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာသည် အလွန်ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်လေးနှစ်အကြာတွင် ဗြိတိသျှနိုင်ငံရှိ ဆရာဝန်များ၏ လေ့လာမှု (British Doctors Study) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှုတွင် အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် ဆရာဝန် လေးသောင်းခန့် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာတို့၏ ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူသော အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားသည့် အကြံပြုချက်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှုသည် ကမ္ဘာအဝှမ်း အကြီးမားအထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ရမည့် တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်။  ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုသူများ၏ ထက်ဝက်သည် အသုံးပြုမှု၏ ရလဒ်ကြောင့်ပင် သေဆုံးရသည်။  ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) ၏ ခန်မှန်းချက်အရ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်သည့် လူ ၆ သန်းခန့်သည် ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုကြောင့် နှစ်စဉ် သေဆုံးနေရသည်။ ဆေးလိပ်မသောက်သော်လည်း ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှုရှိုက်မိသဖြင့် လူ ၆၀၀,၀၀၀ ခန့်လည်း သေဆုံးနေရပေသည်။  ၂၀ ရာစုသို့ရောက်ရှိလာချိန်အထိ ဆေးရွက်ကြီးကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် သန်း ၁၀၀ ရှိခဲ့သည်။  အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစင်တာသည် ဆေးရွက်ကြီး စားသုံးမှုသည် ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် အဓိကကာကွယ်ရမည့် တစ်ခုတည်းသော ပြဿနာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အချိန်မတိုင်ခင် သေဆုံးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ 
ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှုသည် နှလုံး၊ အသည်း၊ အဆုတ်တို့ကို ထိခိုက်စေသည့် ရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် heart attack, လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း၊ နာတာရှည်အဆုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်း (chronic obstructive pulmonary disease - CODP) နှင့် ကင်ဆာရောဂါ - အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကင်ဆာကို ပိုမို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာမှာ လူတစ်ဦးသည် အချိန်မည်မျှကြာအောင် သောက်ခဲ့သည်၊ အရေအတွက်မည်မျှသောက်နေသည် စသည့်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဆေးလိပ်စတင်ကာ စတင်သောက်သည့်အချိန်မှ စတင်ကာ ဆေးချေးများသည် များပြားလာကာ ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကို တိုးပွားလာစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသုများထံမှတစ်ဆင့် ရှုရှိုက်မိပါက အသက်အရွယ်မရွေး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
↑ Prevalence of current tobacco use among adults aged=15 years (percentage)။ World Health Organization။ 11 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-01-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mayo report on addressing the worldwide tobacco epidemic through effective, evidence-based treatment။ World Health Organization။2February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-01-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Health Organization (2008)။ WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2008: The MPOWER Package (PDF)။ Geneva: World Health Organization။ p. 8။ ISBN 92-4-159628-7။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Tobacco Fact sheet N°339 (May 2014)။ 13 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The top 10 causes of death။4November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vainio H (Jun 1987). "Is passive smoking increasing cancer risk?". Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 13 (3): 193–6. doi:10.5271/sjweh.2066. PMID 3303311.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးရွက်ကြီး၏_ကျန်းမာရေးအပေါ်_သက်ရောက်မှုများ&oldid=716315" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။